I-Black Denim Jumpsuit Yonke - Ama-Buddhatrends
I-Black Denim Jumpsuit Yonke
$ 48.00 $ 60.00 Ugcina i-20% ($ 12.00)
Omnyama / Omncane Okumnyama / Okuphakathi Okumnyama / Okukhulu
I-black gloum jumpsuit yinto engaphezulu kokuqoqwa kokugqoka okwesifazane okungajwayelekile futhi ingagqoke ngezikhathi ezihlukahlukene kufaka phakathi izinsuku noma lapho uvakashela abangani. Isitayela sawo siqinisekisa ukuthi uyayigqoka njengoba uguga ngenkathi uhamba ngebhizinisi lakho lansuku zonke. Kubuye futhi uqiniseke ukwengeza isitayela esishukumisayo kunoma yini onayo kwisigqoko sakho sejadi kakade.
Lokhu konke kwenziwa ngephethini eqondile futhi kuza ngobumnyama. Njengalokhu, kwenza ukuhambisana okukhulu kwezingubo noma ama-blouses eza ngezindlela ezehlukene ezifaka iphethini, emigqabhagqabha noma echaziwe.Itunikeza abahlinzeki ukuxuba ukuxuba imibala eminingi ndawonye. Kungagqoka izinhlobo ezahlukene zezembatho ezivela kumahembe amnandi kuya emaqabungwini angenalutho. Isitayela sawo se-jumpsuit sinikeza nabathwali ikhono lokugqoka okuthile okuyi-chic kanye ne-classy, ​​kuyilapho kungabi yinto enzima kakhulu.
Yenziwe ngempahla ephezulu ye-denim, i-black gloum jumpsuit inikeza abathwali ngokubambisana nokududuza kwe-denim, okwenza kube kufanelekile ukusetshenziswa njengokudayiswa kwansuku zonke. Ukubukeka kwe-denim nakho kuqinisekisiwe ukuncoma noma yiluphi uhlobo lwezinto ezigqamile.
Ngokulingana kwayo okujwayelekile, i-black gloum jumpsuit iqiniseke ukuthi ifanelana ngaphezu kwezikhulu ezihlukahlukene zomzimba nobubunjwa ngenkathi igcina ukuzizwa kwayo. Ifika ngobukhulu obuhlukahlukene kuhlanganise no-S, M, no-L. Futhi kufanelekile ukuqiniseka ukuthi ujabulela izinga eliphakeme lokududuzeka njengoba uhamba ngalolu jumpsuit olusha!
(Cm) Ubukhulu bezinwele (cm) Isikhathi
Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Okuningi kusuka kunjiniyela Ótimo produto exatamente como na descriptionção adorei
Espectacular! Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, qhafaza, qhafaza ukuthi i-normalmente yinto ejwayelekile, i-cómodo y de buena calidad, futhi yilapho ungabonakali khona, noma ungayitholi, ungayikwazi ukuzithoba
I-Комбинезон сидит хорошо, запаха практически нет. Nokho, kungakhathaliseki ukuthi, noma kunjalo, kodwa izici ukunikeza lokho. Kuzo zonke izindawo - okumele ukwenze.
I-albhamu kuphela, kodwa ikhona)
I-pant pant yayinkulu eyayisiphambeko sami ngokuphelele kodwa indwangu kanye nekhwalithi yinto enhle kakhulu! Futhi ukulethwa okusheshayo okukhulu!
Джинсы просто супер! Продавец умница! Okokuqala: I-domain yami iyatholakala, i-akhawunti yakho kanye ne-akhawunti yakho kanye ne-imeyli yami yonke ivumela ukuba usebenzise i-akhawunti yakho. I-155, i-46
Ukuze uthole lokhu, khumbula lokhu okushiwo yiMexico. Súper
I-jean jumpsuit enhle kakhulu, ejabule kakhulu nayo nesikhathi esifikile e-Ireland esuka eChina! Ubukhulu buyinto encane kakhulu, ngivame ukuba yi-UK 10 futhi ngiyalile u-M kodwa ngizizwa ngincanyana kakhulu ngaphesheya kwemilenze yami kodwa mhlawumbe nje isitayela. Ungayithenga futhi kodwa mhlawumbe uthole i-L esikhathini esizayo.
Into enhle. Ukulethwa okusheshayo. Ngijabule kakhulu ngento
Ilayisha ukufaneleka kwedivayisi ... Chofoza ikhamera yakho, in home. Рекомендую! Ilayisha ukufaneleka kwedivayisi ... Качество хорошее
Я в восторге! I-28-29 I-XMUMX-I-XNUMX isi-Portuguese isi-M, i-XMUMX-XNUMX isi-Portuguese Ukuzikhethela, ukufaka ikhompiyutha, kungabonakali lutho, kodwa akukho lutho. Ikheli lakho ngeke lilandelwe
Umkhiqizo weza njengoba kuchaziwe, Upakishwe kahle
Iningi, kodwa yonke impela
Siyabonga ukuthi kwakunzima ngokwanele ukuthenga esitolo sakho esikhathini esizayo
Комбез очень милый (когда я в нем чувствую себя как из сериала отбросы ахаха), но не очень фотогеничный, в жизни намного лучше смотриться, решила заказать М как оверсайз на свой эс, сидит свободно, я довольна заказом и с нетерпением жду лета чтоб начать Ilayisha ukufaneleka kwedivayisi ...)) Humushela incazelo ku-isiZulu usebenzisa i-Google Translate?